संसारकै महँगो पढाईः चिनियाँ अर्बपतिको छोरी भर्नामा साढे ७३ करोड ! « GDP Nepal
संसारकै महँगो पढाईः चिनियाँ अर्बपतिको छोरी भर्नामा साढे ७३ करोड !
Published On :6May, 2019 7:09 am
बेइजिङ (एजेन्सी)ः छोराछोरीको पढाइमा अभिभावक कसरी ठगिन्छन् भन्ने एक उदाहरण बनेका छन् एक चिनियाँ धनाढ्य परिवार ।
चिनियाँ अर्बपतिको परिवारले छोरी युसी झाओलाई स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीमा भर्ना गर्नका लागि कन्सल्टेन्टलाई ६५ लाख डलर अर्थात् ७३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बुझाएका छन् ।
समाचारअनुसार युसी झाओ चीनका अर्बपति झाओ ताओका छोरी हुन् । ताओ सेनडोङ बुचङ फर्मा कम्पनीका अध्यक्ष हुन् ।
झाओ ताओ र उनकी छोरी
कन्सल्टेन्ट सिङर अमेरिकाको सर्वाधिक ठूलो कलेज एडमिसन घोटालाका प्रमुख आरोपी हुन् । यो वर्षको मार्चमा उक्त घोटालाको खुलासा भएको थियो । सिङ्गर र उनका सहयोगी धोकाघडी तथा षड्यन्त्र रच्ने विषयमा दोषी पाइएका छन् ।
यसै महिना सजायको घोषणा गरिने भएको छ । सिङगरले आपूmले चाहेको कलेजमा भर्ना गराउनका लागि विद्यार्थीको परिवारबाट ठूलो धनराशि लिएका थिए । चन्दाको रकम कलेज कर्मचारीको तलब, छात्रवृत्ति तथा खेलकुदमा खर्च गरिनेछ भनेर उनले भूmट बोलेका थिए ।
झाओको परिवारमाथि कुनै आरोप लगाइएको छैन । अदालतको दस्तावेजमा पनि उनका कुनै नाम लिइएको छैन । तर, मार्चमा आरोपीलाई गिरफ्तार गरिएपछि अमेरिकी वकिलले एक परिवारले आरोपीलाई ६५ लाख डलर दिएको बताएका थिए ।
यो घोटालाबाट सम्बन्धित कुनै छात्रको परिवारले दिइएको सबै भन्दा ठूलो रकमको खुलासा भएको छ । अब यो खुलासा भएको छ कि उनी झाओको परिवारको सदस्य थिइन् ।
अमेरिकी एजेन्सी एफबीआईले यो मामिलामा ५० मानिसलाई गिरफ्तार गरेको छ । यसमा ३३ परिवार रहेका छन्, जसमध्ये कोइ सेलेब्रिटिज, हाइ–प्रोफाइल वकिल, लगानीकर्ता र धनी व्यक्ति समावेश छन् । यी मानिसले आफ्नो मन परेको कलेजमा बच्चालाई भर्ना गर्नका लागि लाखौं डलर खर्च गरेका छन् ।
*यसअघि प्रकाशित समाचारको शीर्षकमा साढे ७३ करोड हुनुपर्नेमा त्रुटी भएकाले सच्याइएको छ -सम्पादक
सरकारको एक्सनः सुमार्गीको लाइसेन्स खारेजीको भोलिपल्टै रामेश्वर थापाको जहाज ग्राउन्डेड
काठमाडौं । सरकारले खुला अर्थतन्त्रप्रति अनुदार बन्दै मुलुकमा आफू निकटका व्यवसायीलाई मात्र संरक्षण गर्ने क्रोनी
नयाँदिल्ली । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दुई दिने भुटान भ्रमण सकेर आइतबार नयाँदिल्ली फर्किएका छन्
महासंघ कोषाध्यक्षमा निरक केसी
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको रिक्त कोषाध्यक्ष पदमा कार्यकारिणी सदस्य निरक केसी मनोनित भएका